भारत : लोकसभा चुनावको आज प्रथम चरण, कहाँ कहाँ हुँदैछ चुनाव ?
पहिलो चरणको चुनाव अन्तर्गत आज ८ सिटको लागि चुनाव भईरहेको छ ।
२८ चैत, २०७५ || प्रकाशित ०८:१६:००
न्युज ब्यूरो, भारत । भारतमा लोकसभा निर्वाचनका लागि आजदेखि मतदान भईरहेको छ । ७ चरणमा सकिने निर्वाचनको परिणामका विषयमा अनेक अड्कलबाजी र चर्चा जारी छ ।
निर्वाचनमा कसले जित्ला भन्ने तर्कले भारतीय अखबारका पाना रङ्गिएका छन् । टेलिभिजनमा बिहानदेखि साँझसम्मको चर्चा पनि यही छ तर चुनाव जित्नेको तस्बिर अझै धमिलै छ्, कसैको पक्षमा सङ्लिएको देखिँदैन ।
यतिबेला भने सारा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका पाँच वर्षअघिका बाचा सम्झिएका छन् । उनले अघिल्लो चुनावमा अघि सारेका कामको लेखाजोखा गर्दैछन् । पहिलो निर्वाचनमा मानौँ कि भारतीय नेसनल कङ्ग्रेसकै कारण देशको विकास हुन नसकेको र भ्रष्टाचार मौलाएको टिप्पणी गर्ने मोदीको यो पूरा कार्यकाल के कसो भयो, उनका बाचा के कति पूरा भए, विपक्षी कङ्ग्रेस र अरु दलमाथि उनले अघिल्लो निर्वाचनमा लगाएका आरोप के कसरी प्रमाणित भए भन्ने हिसाब किताब अहिले जनताले मिडियामार्फत खोजिरहेका छन् ।
उनको कार्यकालको लेखाजोखा गर्दै जनताले सत्तामाथि औँला ठड्याइरहेका छन् भने सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सरकार निर्माण गर्नेगरी सुविधाजनक बहुमत आउँछ कि आउँदैन ? त्यस दलको मात्र बहुमत प्राप्त हुन नसके पनि भाजपाको सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ या सक्दैन ? यो दुवै अवस्था रहेमा सत्ता समीकरण कस्तो होला ? यिनै प्रश्नको वरिपरि जारी बहसमा चर्चाको केन्द्रमा भाजपा छ अनि त्यस केन्द्रको पनि भित्री भागमा छन् प्रधानमन्त्री मोदी ।
पहिलो चरणको चुनाव अन्तर्गत आज ८ सिटको लागि चुनाव भईरहेको छ । जसअन्तर्गत सहारनपुर, कैराना, मुजफरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपात, गाजियावाद र गौत्तम बुद्धनगरमा चुनाव जारी रहेको छ । यस्तै दोस्रो चरणको चुनाव भने १८ अप्रिलको ८ सिटको लागि हुनेछ ।